Guurku wuxuu caqabad ku yahay horumarka Shaqsiga… - Latest News Updates
Guurku wuxuu caqabad ku yahay horumarka Shaqsiga…
Guurka iyo xorriyadda shaqsiga; waxuu guurku caqabad ku yahay horumarka – iyo xorriyadda shaqsiga siiba haweeneyda:
Sidaas waxaa aaminsan 30-40% haweenka caalamka maanta. Ragga iyaguna aaminsan in hadduu guursado uu xorriyadda waayayo waa isla qiyaastii 40%. Haddii laysu geeyo, sida baadhitaano badani tibaaxayaan, waxay isku noqonayaan qiyaastii 50% haweenka iyo ragga guurka uga caagay xorriyad ay waayayaan. Dadkaas ruux ka mida, kana tirsan shaqsiyaadka caanka ah iyo waliba hantiilayaasha caalamka, waa Oprah Winfrey. Ninkan odayga ah ayaa xiriir jacayl ahi ka dhaxeeyaa ilaa iyo 1986kii oo ahayd markii ay isbarteen. 33 sannadood kadib maanta weli isma qabaan, ismana guursan doonaan. Marbay ugu dhawaayeen 1992kii sida ay sheegeen markaasna durbadiiba way ka noqdeen. Waxa guurkooda hor taagan sidan ayeey Oprah u tibaaxday:
“Nobody believes it, but it’s true,” she said. “The only time I brought it up was when I said to Stedman, ‘What would have happened if we had actually gotten married?’ And the answer is: ‘We wouldn’t be together.’ We would not have stayed together, because marriage requires a different way of being in this world. His interpretation of what it means to be a husband and what it would mean for me to be a wife would have been pretty traditional, and I would not have been able to fit into that.””
Mar kale oo ay ka hadashay iyadoo joogta dalka India waxa ay tiri, “I’m my very own woman” sababtaas ayaanan u guursanayn, oo macnaheedu tahay waxaan ahay ruux tiisu u cadahay. Isagu maadama uu hore u soo guursaday, gabadhiisii ayaa hooyo noqotay 2015dii. Oprah hadda waa 65 jir hantideedu cagacagaynayso 3 billion US dollar. Kuwaa ninku dhalay ayaa u ciirsi ah maanlintay 80 jir tahay.
Maahmaahdan hoose ayaan ayeeyooyinkay ka maqli jiray, inkastooy aysan jaamacado ka bixin, haddana waxa ay xaqiiqsadeen xaqiiqada noloshan, weligaaba “I want to follow my dreams” akhri – soohdin ma dhaafaan ah ayaa jirta! 🙂